နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: နတ်သမီးလေးများ
Labels: ဖတ်မိသောစာများ, ကြည့်စရာ
အခုတော့ လူတွေက သစ္စာမရှိကြလို့ သူတို့က လူမြင်မခံကြတော့ဘူး.. လူတွေရှိတဲ့ နေရာဆီကို ထွက်မလာကြတော့ဘူးတဲ့...
နတ်သမီးလေးတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ တို့တော့ အခုမှ ဖတ်ဖူးတာ..။ ချစ်စရာလေးတွေနော်.. <3
ကိုလူထွေးက အခုထိ ကာတွန်းကြည့်တုံးကိုးး အဟိုးးးအဟိုးးးးး
မ ရေ ချစ်စရာလေးတွေ နတ်သမီးလေးတွေက
စိတ်ထဲမှာလည်း နောက်က ဘယ်သူလိုက်လာပါလိမ့် ဆိုပြီး ပြန်ပြန်လှည့်ကြည့်မိတာ ဘူမှလည်း ကျိဘူး.
အင်းနော် အစ်မ. ဆန်းကြယ်တယ်နော်.။ အသဲတော့ ယားစရာပဲ. ဘာမှမမြင်ရပဲ ကိုယ့်ကို ကြည့်နေသလို ခံစားရရင် တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်.။